Unokukhetha njani uMboneleli weNkonzo ye-imeyile | Martech Zone
Kule veki ndadibana nenkampani eyayicinga ngokushiya umboneleli wesevisi ye-imeyile kunye nokwakha inkqubo ye-imeyile ngaphakathi. Ukuba ubundibuze kwiminyaka elishumi eyadlulayo ukuba ibingumbono olungileyo lowo, ngendingazange nditsho. Nangona kunjalo, amaxesha atshintshile, kwaye itekhnoloji ye-ESPs kulula kakhulu ukuyiphumeza ukuba uyazi into oyenzayo. Kungenxa yoko le nto siphuhlise i-CircuPress.
Yintoni etshintshe nabaNikezeli ngeenkonzo ze-imeyile?
Olona tshintsho lukhulu kwii-ESPs lube kukuhanjiswa. Ngokwenyani ayizizo ii-ESPs ezitshintshileyo, zii-ISPs. I-imeyile yokuhambisa iingcali kwii-ESP eziphambili ezazisetyenziselwa ukunxibelelana ngokuthe ngqo nabanikezeli beenkonzo ze-Intanethi ukusombulula ingxaki kunye nokuqinisekisa ukuhanjiswa okufanelekileyo. Ngexesha elide, nangona kunjalo, ii-ISPs ziye zazivalela ezo ofisi kwaye zajika zalungisa iindlela zokujonga igama lomthumeli, ukuhlalutya umxholo, ukuvimba okanye ukwamkela i-imeyile, kwaye uyihambise kwiifolda ze-SPAM okanye kwi-inbox.
Gcina ukhumbula ukuba ukuhanjiswa akuthethi ukuba ungene kwibhokisi engenayo! I-100% yeemeyile zakho inokuba iya kwiFolda yeJunk, kwaye oko kulingana nokuhanjiswa kwe-100%. Nokuba usebenzisa okanye awusebenzisi i-ESP ayikuniki naliphi na ithuba elingcono lokufikelela kwi-inbox ukuba uyazi into oyenzayo. Sisebenzisa 250ok ukubeka esweni ukubekwa kwethu kwebhokisi engenayo kunye nodumo.
Kukho iimpawu ezifihlakeleyo Ababoneleli ngeNkonzo ye-imeyile Isithembiso sokuba awunakunqwenela ukuphinda uphuhlise ngaphakathi, nangona kunjalo. Kuya kufuneka uvavanye iindleko zophuhliso kwixabiso lenkonzo ye-imeyile. Ngokoluvo lwam, xa uqala ukuthumela amakhulu amawaka e-imeyile ngenyanga, unokufuna ukujonga ukuphuhlisa isisombululo sakho.
isantya -Ukuba uthumela izigidi ze-imeyile ngosuku, ukuphuhlisa iziseko zenkampani enje I-Salesforce ngqo ngekhe ibe nengqondo. Banokubeka iibhiliyoni ze-imeyile ngaphandle kokuqhwanyaza iliso.
U bungcali -Ukuba awunabasebenzi be-savvy okanye ufuna into eninzi yokubamba ngesandla ngokwenza kunye nokwenza izicwangciso zakho zokuthengisa nge-imeyile, awufuni kwakha isisombululo sakho. Unokufuna ukusebenza nenkampani enkulu efana UDelivra obonelela ngenkonzo ebalaseleyo kubathengi.
Ulawulo lweBounce Ukuhanjiswa kwe-imeyile akukho lula njengokuthumela i-imeyile. Kukho ezininzi ze Izizathu zokuba kutheni ii-imeyile zibhampile Kwaye kufuneka wakhe kwaye ulawule inkqubo yokuthatha isigqibo sokuba uyithumele kwakhona i-imeyile okanye ungabhalisi kumamkeli we-imeyile.
Ukuthotyelwa komthetho we-SPAM - Nazi imithetho eyahlukeneyo kwihlabathi liphela elawula ukusetyenziswa kwe-imeyile ukucela urhwebo. Ukuqinisekisa ukuba uyathobela kunokukugcinela iintloko ezininzi.
uyilo -Ngaba ufuna kwangaphambili noluphendulayo itemplate ye-imeyile okanye uyilo? Okanye ngaba ufuna ukutsala kunye nokulahla uyilo? Okanye ngaba ufuna umxholo ophambili kunye nokudityaniswa ngokwezifiso kwi-imeyile yakho? Uya kufuna ukuqinisekisa ukuba i-ESP yakho inezixhobo kunye namandla owadingayo ukuze uzenzele kwaye uthumele ii-imeyile ngokufanelekileyo.
Ulawulo Lababhalisile Ukhetho lomxholo, iifom zobhaliso, kunye namaziko angabhalisanga ngundoqo ekufumaneni nasekuphatheni i-imeyile kubabhalisi.
API -Ngaba uyafuna ukulawula ababhalisile, uluhlu, i-contnet, kunye nemikhankaso engaphandle kwe-ESP? Umelele API ibalulekile.
Umdibaniso womntu wesithathu -Mhlawumbi ufuna ukudityaniswa kweshelfu kwinkqubo yakho yolawulo lomxholo (I-CircuPress inale WordPress), iqonga loLawulo lobuDlelwane loMthengi, iqonga le-E-Commerce okanye enye inkqubo.
Ukubika -Cofa amaxabiso, A uvavanyo / B, uluhlu lokugcina, ukulandela umkhondo woguqulo, kunye nezinye iingxelo ezomeleleyo ezinika ingxelo ngokupheleleyo iimetrikhi ze-imeyile izokunceda ekwandiseni ixabiso lenkqubo yakho yokuthengisa nge-imeyile. Qiniseka ukuba uhlalutya kwaye uthelekise amanqaku e-ESP nganye.
Ewe, amaxabiso ngundoqo! Asiboni umohluko omkhulu kakhulu kwiimpawu phakathi kwabanikezeli beenkonzo eziphezulu ze-imeyile kwintengiso ngokuthelekiswa nee-ESPs ezincinci. Ukuba ungazinciphisa ezi zinto zingasentla zibaluleke kakhulu kumbutho wakho, ndicinga ukuba ukuthenga ngexabiso kuyavakala. Kwaye ukuba uthumela izigidi ze-imeyile, kunokuba yinto enengqondo ukudibanisa nomntu wesithathu onje Thumela, okanye wakhe eyakho inkqubo.
tags: 250okugaxekile-spamisetyhulai-imeyile apiUlawulo lwe-imeyile bounceUyilo lwe-imeyileubuchule be-imeyilei-imeyile infographicukuhlanganiswa kwe-imeyileisantya sokuthumela i-imeyileinkonzo ye-imeyileUmboneleli wesevisi ye-imeyileukuthotyelwa kogaxekile nge-imeyileulawulo lomrhumo we-imeyileemailmonksespindlela yokukhethaumthetho wogaxekileUlawulo lomrhumo